Hiran State - News: Golaha wasiirada TFGda oo isku shaandheyn lagu sameeynayo iyo wasiirka qorsheynta oo ka mid ah
Golaha wasiirada TFGda oo isku shaandheyn lagu sameeynayo iyo wasiirka qorsheynta oo ka mid ah
HS:-Golaha wasiirada TFGda oo isku shaandheyn lagu sameeynayo iyo wasiirka qorsheynta oo ka mid ah kuwa xilkooda laga xayuubinayo kadib markii ay qorshahaasi ay isku af garteen Shariifka iyo C/wali Gaas.
Wararka naga soo gaaraya magaalada Mogdisho ayaa sheegaya in mudo aan hada si rasmi ah loo shaacin ay qorsheynayaan Shiikh Shariif iyo R/wasaare Gaas iney golaha wasiirada TFGda ku sameeyaan isku dhaandheyn halka ay qaarkood ku bedelayaan xilalkooda kuwa kale oo ka soojeeda qabiiladooda.
Hadaba wasiirada xilalkooda waaynaya ayaa waxaa ka mid ah wasiirka qorsheynta iyo xiriirka caalamiga Cabdullaahi Godax Bare iyadoo uu R/wasaare Gaas doonayo inuu xilka ka qado Mr Godax kadib markii sida uu Shariifka sheegay ka soo bixi waayey amaba ku fashilmay inuu bulshada reer Hiiraan ka dhaadhiciyo in Hiiraan la hoos geeyo Jowhar, walow qorshaha hada xilka looga qaadayo uu abaabulay R/wasaare Gaas.
Shaqsiga Mr Godax lagu bedelayo magaciisa oo sedaxan iyo waliba naaneys(Nickname) lagu garto gadaal ayaan ka soo sheegi doona. TFGda howsheeda meel fiican ayey mareysaa marka laga hadlayo jahwareerka siyaasadeed ee la soo darsay hogaanka sare.
Qorshahan xilka looga qaadayo wasiirka qorsheynta ayaa ah mid uu codsaday R/wasaare Gaas sida warar isa soo tarayo lagu helayo,sidaasina isku shaandheynta la filayo ku dhacdo dhawaantan. waa laga yaaba iney soo daahdo laakinse waa arinta hada miiska u saaran Shariifka iyo R/wasaare Gaas.
Arintaan ayaa hadii ay u dhacdo sidaan sheegnay waxey ka dhigan tahay in wasiirka qorsheynta uu xafiiska ka tagayo isagoo aan dhaleeceysneyn maadama uu horey uga aqbalay go,aankii ay qurbajoogta reer Hiiraan ka qaateen arintii Hiiraan iyo Jowhar oo uu iyaga ku mowqif noqday.
Wasiirkasta oo reer Hiiraan ah oo mid kale lagu bedelo dhib ma leh, laakinse Shariif iyo C/wali wax badan ayeysan ogeyn waayo wasiirkii xilka laga qaado iyo midka la magacaabayo intuba waxey hada ku xiran yahiin qurbajoogta reer Hiiraan waxaana leys dhaafsadaa warbixinada oo midka imaanayo isagoo og waxa lagu qoomay midkii ka horeyey ayuu xafiiska tagayaa, arintaan oo soo bilaabatay waxii ka danbeyey dhismahii maamul goboleedka Hiiraan State si loo ogaado meesha ay wax ka qaldan yahiin. Inta badan qeybaha kala duwan ee bulshada Hiiraan ayaa wax badan ka faa'idey warbixinadan iyo macluumaadkan leys dhaafsanayo si marka go,an cad laga gaarayo arin markaasi taagan ay u noqoto mid xaqiiqadeeda la hayo inta aan lagu deg degin.
Shiikh Shariif oo siweyn u dareensan in gursiga uu ku fadhiyo ay waqtigiisa wax yar ka harsan tahay waxyaabahani xumaan kama ahan ee waxey ka tahay armaad heshaa shaqsi reer Hiiraan ah oo inta uu xafiiska joogo Hiiraan hoos geyn kara Jowhar.malaha waxuusan ogeyn wasiirka uu doonayo inuu shaqada ka ceyriyo iyo midka uu soo wado in ay danaha Hiiraan isku aragti ka yahiin marka arinta ay gaarto maxaa noo dan ah iyo wax la mid ah.
Laakinse marka xalada dhinaca kale laga eego waxey u badan tahay iney xukumada dhanba dhacdo kadib marka isku shaandheynta la sameyo maadaama aysan hoganka sare hal meel wax iskula wadin oo ay kala socdaan.
Inkasta oo aanu ka hor dhaceyn siyaasadaha jaantaa roganta ah ee Mogdisho yaala hadane la soco wararkeena danbe.
· admin on November 21 2011 00:15:52 · 0 Comments · 1919 Reads ·
14,586,114 unique visits